Fifanjevoana, fifanosehana tetsy Mahamasina: 16 namoy ny ainy, 80 mahery naratra | NewsMada
Araka ny loharanom-baovao voaray avy eny amin’ny sampana vonjy aina HJRA Ampefiloha, halina tamin’ny 7 ora sy sasany, 16 no namoy ny ainy, 80 mahery kosa no naratra. Io no vokatry ny fifanjevoana sy fifanosehana teo amin’ny vavahadin’ny Kianjan’i Mahamasina, omaly, taorian’ny nahavitan’ny matso. Semban-drahona indray ny fankalazana ny fetim-pirenena.
Horakoraka, hikiaka, ranomaso, fifanjevoana…! Izany no zava-nisy teny amin’ny hopitaly HJRA, omaly hariva nanomboka tamin’ny 6 ora. Nanao tohivakana ny fitanterana ireo naratra tamin’ny fifanosehana teo amin’ny vavahadiben’ny Kianjan’i Mahamasina aty amin’ny faritra voatokana ho fidiran’ny sarambabem-bahoaka (amin’ny vavahady ilany manoloana ny Sainte Famille). Nifanesy nitatitra ireo maratra ny fiara 4×4 an’ny zandary, polisy, miaramila niampy ireo fiara mpitondra marary teny Mahamasina. Olon-dehibe ny dimy amin’ireo namoy ny ainy raha tanora 15 taona sy 16 taona kosa ny ambiny, araka ny fanazavan’ny mpitsabo hatrany. Raha ny fanazavana voaray, vita soa aman-tsara ny matso ary teo am-pivoahana ny vavahady no nitranga ny tsy nampoizina satria nibosesika nivoaka ireo olona tao an-kianja, nisy kosa ireo nibosesika hiditra hijery indray ny podium nandraisan’ireo mpanakanto anjara taorian’ny matso lehibe. Raha ny zava-nisy teny Mahamasina, marobe ireo olona tsy tafiditra intsony tao amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ary efa nitangorona teny ivelany. Vao vita ny matso dia nibosesika hiditra hijery podium ireo teny ivelany nefa ny tao anatiny tsy mbola tafavoaka ka izao niafara tamin’ny faharatrana olona marobe izao. Nisy ankizikely, vehivavy, olon-dehibe ireo naratra. Tao ireo voahitsaka teo amin’ny lohany, ny vatany ankoatra ireo folaka sy tapaka.
Horaisin’ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana…
Nanao izay ho afany ireo dokotera tao amin’ny sampana vonjy aina ao amin’ny hopitaly HJRA tamin’ny famonjena ireo niharam-boina. Feno ny efitrano tao amin’ny sampana vonjy aina. Misy tamin’ireo niharam-boina no tsy manan-kavana fa nandeha irery niaraka tamin’ny namany kanjo zava-doza no nitranga. Nitangorona manoloana ny sampana vonjy aina ireo andian’olona marobe nitebiteby hijery ny havany. Andrasana, araka izany, ny fivoaran’ireo maratra mbola tsaboina eto amin’ny hopitaly. Horaisin’ny fanjakana an-tanana kosa ny lany rehetra amin’ny fitsaboana ireo maratra.
Fa araka ny tatitra nampitain’ny mpitsabo tao amin’ny sampana vonjy aina hatrany, miisa 103 ireo olona nandalo fizahana tao amin’ity sampana ity, ny 25 jona. Adiady sy lozam-piarakodia ny ankamaroan’ireo nandalo tao amin’ity sampana ity ankoatra ireo olona marobe naratra tamin’ilay fifanosehana teo amin’ny vavahadiben’i Mahamasina. Ho an’ny tao amin’ny sampana famelomana aina kosa nilamina amin’ny ankapobeny. Tsy nisy, araka ny voalazan’ny mpitsabo ny olona nandalo tao amin’ity sampana ity.